Waa Laga Yaabaa In Virgil Van Dijk Uu Si Fiican Ugu Guulaysto Ballon d'Or, Balse Lionel Messi Ayaa Wali Sii Ah Ka Ugu Fiican. - Gool24.Net
Waa Laga Yaabaa In Virgil Van Dijk Uu Si Fiican Ugu Guulaysto Ballon d’Or, Balse Lionel Messi Ayaa Wali Sii Ah Ka Ugu Fiican.
Saadaasha abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Ballan d’Or ayaa hadda u muuqata mid u dhexaysa Virgil Van Dijk iyo Lionel Messi inkasta oo ay saadaashu u badan tahay in xidiga reer Holland ee Van Dijk uu ku guulaysan doono.
Halyaygii hore ee xulka qaranka Holland ee Rafael van der Vaart oo u soo ciyaaray kooxo badan oo ay Real Madrid ka mid tahay ayaa ku dooday in Lionel Messi uu wali sii ahaan doono xidiga aduunka ugu fiican xataa haddii uu Van Dijk abaal marintan ku guulaysto.
Rafael van der Vaart ayaa aaminsan in Van Dijk uu si fiican ugu guulaysan karo abaal marinta Ballon d’Or balse ayna taasi Lionel Messi ka qaadi karin in uu wali sii ahaado xidiga aduunka ugu fiican.
Van Dijk ayaa Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo dhawaan ku garaacay abaal marinta xidiga Yurub ugu fiican waxayna ku soo wada baxeen saddexda xidig ee iskugu soo hadhay abaal marinta The Best ee ay FIFA dhawaan ku bixin doonto magaalad Milan.
Rafael van der Vaart ayaa la waydiiyay haddii uu difaaca xulkiisa Netherlands iyo kooxda Liverpool ee Van Dijk uu ku guulaysan karo Ballon d’Or ayaa yidhi: “Haa dabcan, maxay tahay sababta diidaysaa. Ismar barbar dhigi kartid ciyaartoyda, haddii aad difaac doorato, micnaheedu ma aha in uu Messi ka fiican yahay”.
Rafael van der Vaart oo qiraya sida uu Van Dijk ugu qalmo ku guulaysiga abaal marinta Ballon d’Or ayaa yidhi: “Waxaa waajib kugu ah in aad aragto waxa uu isagu ku soo guulaystay, sida uu kooxdiisa muhiim ugu yahay. Waxaan arki doonaa waxa dhaca”.
Inkasta oo Rafael van der Vaart uu qirtay in Van Dijk uu u qalmo ku guulaysiga abaal marinta xidiga aduunka ee Ballon d’Or, waxa uu haddana cadeeyay in aanu Messi ka fiicnayn ka ciyaartoy ahaan.